Duulli Abbaa Qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooDuulli Abbaa Qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti
Duulli Abbaa Qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti mootummaa biyya bulchaa jiruun baname cimee itti fufee jira.
Via BB$: Waxa. 19/2020
Meeshaalee hoteelaa adda addaatiin guutamee kan jiru konteenaroonni lakkoofsaan 11 tahan poortii Jabuutiitti humnoota mootummaa Itiyoophiyaatiin saamamuun gabaafame.
Mootummaan Itiyoophiyaa duula Abbaa qabeenyaa Dinquu Dayyaas irratti bane kallattii adda addaatti babal’isuun Arjaa kana hiyyoomsuuf cichoominaan irratti hojjetaa jira. Jalqaba yakka tokko malee giddu gala bashannanaa fi Rizortii Soodaree saamsanii cufan. Kunis hawaasa dallansiisuun gaaffii baay’ee kaasee ture.
Haata’u garuu mootummaan ammas duula Abbaa qabeenyaa kana irratti bane kallattii adda addaatiin cimsee itti fufee jira. Konteenaroonni 11 kan meshaalee hoteelaa adda addaa baatanii jiran qabeenyummaan meeshichaa kan Obbo Dinquu Dayyaas tahe guyyaa kaleessaa wax-18/2020 poortii Jibuutitti tahe jedhanii humnoonni mootummaa saamicha irratti geggeessuutu himame.
Qabeenyi Saamame kun gara qarshii miliyoona 60 olitti kan tilmaamamu tahuus maddeen BBStti himaniiru.
Saamichi akkanaa Obbo Dinquurratti kan raawwateefi Kun kan dhagahame immoo erga Rizoortii Sodaree irratti cufanii qabeenya isaa saamuu fi dhabamsiisuu, akkasumas duula maqa balleessii walirraa hin citin wayta geggeessaa jiranitti.
Olola TVn Walta Dinquu Dayyaas irratti banee fi shirri qondaaltonni Mootummaa Abbaa qabeenyaa Dinquu Dayyaas irratti xaxaa jiru dhaabbachuu akka qabu Abbaan Gadaa Tuulamaa Duraanii Yuuba duraa ta’uun yeroo ammaa Gadaa Tuulamaa tajaajilaa kan jiran Bayyanaa Sambatoo akeekkachiisan.
Kaleessa qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa taphataa nama ture Abbaa qabeenyaa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti duuluun waan dabre irraanfachuudha. Duulli Dinqurratti raawwatamus waan inni gaafa rakkoo saba isaa bira dhaabbateefi. An inumaayyuu waan darbe gaafan yaadadhu imimmaantu na qaba. Dinquun qabsoo Oromoo daa’ima itti dhabe. Gochi amma Dinqurratti rawwatamaa jiru nama boochisa. Hoo balleesse seeraan gaafatanii gorsuun osoo irra jiruu miidiyaadhaan duula maqa balleessii irratti banuun waan heddduu nama qaaanessu tahuu kan dubbatan yuuba duraa Gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sambatooti.
Obbo Dinquun Goota Oromooti malee saamtuu miti kan jedhan Hayyicchi Gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sambatoo maqaa Dinquuu waan isa hin fakkaannen kaasuun hedduu kan isa gaddisiise tahuu ibsuun dhugaaf dhaabbachuu isaanii mul’isan.
Documentry kijibaa Tvn Waaltaa hojjete ilaalchisee Adeemsi akkanaa kun adeemsa Jabaa Oromoo ittiin cabsan waan taheef Oromoon jabeessee wal eeggachuu akka qabus dhaameera. Dabaluunis Osoo abbootin qabeenyaa Gujii keessatti dhala Oromoo qaama hir’uu taasisan jiranuu Dinqurratti xiyyeeffachuun maalif barbaachise? Ijji isaanii achi hin ilaaltuu jechuun ija isaanii akka Garas garagalfatan akeekkachiisan.
Xumurarratti Yuubni Duraa Gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sambatoo gadda guddaa keessatti kufuun biyya tanaa toluun nama miidhayyu jedhan. Kanaaf Duulli qindaa’an Arjaa Oromoo Dinquu Dayyaas irratti baname kun hatattamaan akka dhaabbatus akeekkachiisan. Oromoon Jabaa ofii erga du’ee osoo hin taane osoo inni lubbuun jiru bira dhaabbatee eeggachuun, manguddoonni rakkoo jirtu hirmannaa taasisanii furuun dirqama Oromoo cufaa tahuus Abbaan gadaa Tuulamaa Duraanii Bayyanaa Sambatoo Dhaammatanii jiru.
Mootummaan Abbootii Qabeenyaa Oromoo kanneen hawaasaf tola Oolaa turanii fi Ummaticha keessatti jaalala guddaa horatan irratti, Olola banuun, daldala keessaa baasanii Ummataan akka jibbaman gochuun Duulli inni gaggeessaa jiru gonkuma hin milkaawu jedhu hayyoonni.